health – KTM NEPAL TV
यस्तो छ मुलाको पात खानुको ८ फाइदा
एजेन्सी । धेरैजसो मानिसले मुला खाएर त्यसको पात त्यसै फ्याकिदिने गर्छन् । तर तपाइलाई थाहा नहुन सक्छ मुलाभन्दा बढि मुलाको पात खानु फाइदाजनक हुन्छ । यसमा धेरै पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छ जसले हामीलाई धेरै खालका स्वास्थ–सम्बन्धी…
ज्योतिष शास्त्र अनुसार हात हेरेर भविश्य बताउने विषय त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर समुन्द्र शास्त्रले शरीरका विभिन्न भागका बनौट र त्यहाँ रहेका रेखाका आधारमा मानिसको भाग्य र स्वभाव बताउन सकिने बताउँछ…
काठमाडौं - दूध र दही सजिलै जहाँ पनि पाइने खानेकुरा हुन् । यी दुवैको सेवन स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । तर दूधभन्दा दही खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । दूधलाई अमिलो बनाएर दही जमाइने हो…
होशीयार ! तपाईको यिनै बानीले किड्नी ड्यामेज हुन्छ…
एजेन्सी । कतिपय अवस्थामा हाम्रा बानीहरुको पनि किड्नीमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले त्यस्ता बानीहरु थाहा पाइराखेको राम्रो । केही त्यस्ता बानीहरु जसबारे सचेत हुन जरुरी देखीन्छ – १। पानी कम पिउने किड्नी सम्बन्धी रोग…
पत्रिकामा राखेर खानेकुरा नखानुहोस्, लाग्छ घातक रोग !
एजेन्सी : बाटोमा उभिएर चनाचटपटे खान त मजा लाग्ला तपाईंलाई । पत्रिकाको चुच्चे भाँडो बनाएर चटपट खाने गर्नुभएको होला । अनि कहिलेकाहीँ अल्मुनियम फोइल वा प्लास्टिक नभेटेर पत्रिकामै रोटी बेर्ने गर्नुभएको होला । यसो गर्नु…
रोग चट पार्न खानुस् यी प्राकृतिक औषधि
healthMarch 19, 2018
एजेन्सी। बिरामी हुँदा औषधिको लागि मेडीकल धाउने गर्छौ , जुन लामो समयसम्म खाए स्वास्थ्यमा असर पर्न थाल्छ । औषधिका रुपमा प्राकृतिक खानेकुरा खाएमा पनि हुन्छ । जुन एकदमै सजिलै पाउन सक्छौ। प्राकृतिक खानेकुराले शरीरमा रोगसँग…
थाहा नै नभई यसरी हुन्छ आँखामा क्यान्सर…
आँखामा क्यान्सर हुन्छ भन्ने सामान्य जनचेतनासम्म नहुँदा यस्ता समस्या भएका बालबालिका बढिरहेका छन् । बालबालिकामा मात्र नभएर अन्य उमेर समूहका मानिसमा पनि आँखाको क्यान्सर हुन्छ । प्रमुख लक्षण नेपाली समाजमा आँखा टेढो हुनु । आँखाको…
दाँत पहेँलो भयो ? यसरी चम्काउनु होस् एक…
काठमाडौँ । कागती हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने खाद्य पदार्थ हो । कागतीलाई खानामा तथा सलादमा बड प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने पेय पदार्थमा समेत मिसाएर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यस्तै, कागतीलाई औषधीका रूपमा समेत प्रयोग…
डाइबेटिज रोगका लागि भगवानको वरदान हो यो फल…
healthMarch 18, 2018
काठमाडौं - पछिल्ला दिनमा मानिसको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थ्य खानपानका कारण मानिसमा विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । यस्ता रोगहरु बढ्नुमा मानिसको विलाशी जीवनशैली व्यायामको कमी आदीका कारणले मानिसमा रोग बढीरहेको छ । जसका…
शरीर सञ्चालन गर्न खाइने खानेकुराले हामीलाई पोषण दिन्छ भने कहिलेकाहीँ बिरामी पनि बनाउँछ। हाम्रो स्वादे जिब्रोले चट्याकचुटुक र मसालेदार खानेकुरा खाने जब बनाउँछ, समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।हाम्रो समाजमा मासुलाई विशेष परिकार मानिन्छ। चाडबाड, खुसियाली र…